ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းတံတား (ဘီလူးကျွန်း) - ဝီကီပီးဒီးယား
16°26′26.9″N 97°36′33.8″E﻿ / ﻿16.440806°N 97.609389°E﻿ / 16.440806; 97.609389ကိုဩဒိနိတ်: 16°26′26.9″N 97°36′33.8″E﻿ / ﻿16.440806°N 97.609389°E﻿ / 16.440806; 97.609389
နှစ်လမ်းသွား သံမဏိသံပေါင် ခုံးတံတား
၅,၂၃၀ ပေ (၁,၅၉၀ မီတာ)
၂၈ ပေ (၈.၅ မီတာ)
၈ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀၁၅
ကျပ်သန်း ၅၉,၈၀၀ ခန့်
၉ မေ ၂၀၁၇
၂၇ ဧပြီ ၂၀၁၇
ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းတံတား (ဘီလူးကျွန်း) တည်နေရာ
ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းတံတား (ဘီလူးကျွန်း) သည် မြန်မာနိုင်ငံ၊ မွန်ပြည်နယ်တွင် တည်ရှိပြီး သံလွင်မြစ်အား ဖြတ်ကျော်တည်ဆောက်ထားကာ မော်လမြိုင်မြို့နှင့် ချောင်းဆုံမြို့အား ဆက်သွယ်ထားသည့် တံတားတစ်စင်း ဖြစ်သည်။ တံတားကို ၂၀၁၇ ခုနှစ် မေလ ၉ ရက်နေ့တွင် ဖွင့်လှစ်ခဲ့သည်။
တံတားကို ခန့်မှန်းငွေ ကျပ်သန်း ၅၉,၈၀၀ ဖြင့် တည်ဆောက်ထားပြီး အရှည် ၅,၂၀၃ ပေ၊ အကျယ် ၂၈ ပေရှိပြီး နှစ်လမ်းသွား သံမဏိသံပေါင် ခုံးတံတားအမျိုးအစား ဖြစ်သည်။ မော်လမြိုင်ဘက်ကမ်း မုပွန်ချဉ်းကပ်လမ်းမှာ ၇၅၇ ပေခန့်နှင့် ဘီလူးကျွန်း ကညှော်ချဉ်းကပ်လမ်းမှာ အရှည် ၁၆,၉၈၀ ပေ ရှိသည်။ သမ္မတဦးသိန်းစိန်လက်ထက် ၂၀၁၅ ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလ ၈ ရက်နေ့တွင် သံလွင်တံတား (ချောင်းဆုံ) အမည်ဖြင့် စတင်ပန္နက်ချ တည်ဆောက်ခဲ့သည်။
၂၀၁၇ ခုနှစ် ဧပြီ ၂၆ ရက် ည ၉ နာရီတွင် ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းတံတား (ဘီလူးကျွန်း)အမည်ဖြင့် ဆိုင်းဘုတ်တင်ခဲ့ပြီး ဧပြီ ၂၇ ရက် နံနက် ၉ နာရီ ၄၅ မိနစ်၌ ဆိုင်ကယ်များနှင့် ကားများအား အခမဲ့ဖြတ်သန်းခွင့်ပြုခဲ့သည်။
သံလွင်တံတား (ချောင်းဆုံ) အမည်ဖြင့် စတင်တည်ဆောက်ခဲ့သော်လည်း တည်ဆောက်မှုပြီးဆုံးမည့် အချိန်တွင် ပြည်သူ့လွှတ်တော်တွင် ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း တံတားအမည်အဆို အတည်ပြုခဲ့ရာ ဒေသခံ မွန်တိုင်းရင်းသား အချို့က သံလွင်တံတား (ချောင်းဆုံ) ဟုသာ သတ်မှတ်ရန် ၂၀၁၇ ခုနှစ် မတ်လအတွင်း ဆန္ဒပြခြင်း နှစ်ကြိမ်၊ ဧပြီလတွင် ကန့်ကွက်မှု လက်မှတ်စုဆောင်းမှုများ ပြုလုပ်ခဲ့ကြပြီး ၂၀၁၇ ခုနှစ် ဧပြီလ ၂၆ ရက်နေ့အထိ လက်မှတ်ပေါင်း တစ်သိန်းခွဲခန့် ရရှိခဲ့သည်ဟု ဆိုသည်။
တံတားကို ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းတံတား ဟု အမည်ပေးပါက အမျိုးသားပြန်လည်သင့်မြတ်ရေးကို အထောက်အကူမပြုသည့်အပြင် တိုင်းရင်းသားစည်းလုံးညီညွှတ်မှုမပြိုကွဲရေးကို ထိခိုက်စေမည်ဖြစ်သောကြောင့် ပြည်ထောင်စုအစိုးရအနေဖြင့် အလေးအနက် ပြန်လည်သုံးသပ်ပေးပါရန် ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ၊ တိုင်းရင်းသားစည်းလုံးညီညွတ်ရေးပါတီ၊ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီပါတီသစ်၊ အမျိုးသားတိုးတက်ရေးပါတီ၊ ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ (မြန်မာ) အပါအဝင် ပါတီပေါင်း ၁၄ ခုက ၂၀၁၇ ခုနှစ် ဧပြီလ ၅ ရက်နေ့က ကြေငြာချက်ထုတ်ပြန် တောင်းဆိုခဲ့သည်။
မွန်ပြည်နယ်၊ ပေါင်မြို့နယ် ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဒေါ်မိကွန်ချမ်း၏ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းတံတားဟု အမည်ပေးရန် အဆိုအား ၂၀၁၇ ခုနှစ် ၁၄ ရက်တွင် ပြည်သူ့လွှတ်တော်တွင် မဲခွဲဆုံးဖြတ် အတည်ပြုခဲ့ရာ ထောက်ခံမဲ ၂၁၇ မဲ ၊ ကန့်ကွက်မဲက ၄၃ မဲ၊ ကြားနေ ၁၁၆ မဲဖြင့် အမည်ပြောင်းလဲခြင်း အဆို အနိုင်ရခဲ့သည်။
↑ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းတံတား (ဘီလူးကျွန်း) ဖွင့်လှစ်။ မဇ္ဈိမ နေ့စဉ်သတင်းစာ (၁၀ မေ ၂၀၁၇)။ ၁၉ မေ ၂၀၁၇ တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ ၂.၀ ၂.၁ သန္တာလှိုင်၊ ရဲနိုင် (၂၈ ဧပြီ ၂၀၁၇). "ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းတံတား ဆိုင်းဘုတ်တင်ပြီး စတင်ဖြတ်သန်းခွင့်ပြု တံတားဖွင့်ပွဲ ခမ်းခမ်းနားနား ကျင်းပမည်ဖြစ်ပြီး ဆိုင်းဘုတ်တင်ခြင်းကို ပြောဆိုနေမှုများမှာ ဖွနေခြင်းသာဖြစ်ကြောင်း မွန်ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ် တုံ့ပြန်". ၇ ရက် နေ့စဉ်သတင်းစာ ၁၄၂၆. Retrieved on ၂ မေ ၂၀၁၇.
↑ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းတံတား (ဘီလူးကျွန်း) ကို ယနေ့စတင် အသုံးပြုနိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်း မွန်ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ် ဆို။ Eleven Media Group (၂၇ ဧပြီ ၂၀၁၇)။ ၂ မေ ၂၀၁၇ တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ မော်လမြိုင်-ချောင်းဆုံ သံလွင်မြစ်ကူးတံတားကို ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းတံတား (ဘီလူးကျွန်း) အမည်ဖြင့် ဧပြီ ၂၇ ရက် နံနက်မှစ၍ ဖြတ်သန်းသွားလာခွင့်ပြုခဲ့။ Eleven Media Group (၂၇ ဧပြီ ၂၀၁၇)။ ၂ မေ ၂၀၁၇ တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းတံတား အစား ချောင်းဆုံတံတား အမည်ပြောင်းရေး လက်မှတ်ကောက်ခံ။ ဘီဘီစီ မြန်မာပိုင်းအစီအစဉ် (၂၆ ဧပြီ ၂၀၁၇)။ ၂ မေ ၂၀၁၇ တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ ၆.၀ ၆.၁ စိုးသူအောင် (၆ ဧပြီ ၂၀၁၇)။ မွန်ပြည်နယ် ချောင်းဆုံတံတား နာမည်ပေးသည့်ကိစ္စ ပြန်သုံးသပ်ပေးရန် နိုင်ငံရေးပါတီ ၁၄ ခုကတောင်းဆို။ မဇ္ဈိမ နေ့စဉ်သတင်းစာ။ ၂ မေ ၂၀၁၇ တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ ဝင်းနန္ဒာ (၂၇ ဧပြီ ၂၀၁၇)။ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းတံတား ဆိုင်းဘုတ်တပ်ဆင်တဲ့ ကိစ္စ ဒေသခံတွေစိတ်ပျက်။ ကုမုဒြာ ဂျာနယ်။ ၂ မေ ၂၀၁၇ တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းတံတား_(ဘီလူးကျွန်း)&oldid=504400" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၂၃ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀၂၀၊ ၁၃:၄၇ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။